Iibso telefoonno heer sare ah oo jaban: dalabyo iyo qiimo dhimis laga sameeyo Amazon | Androidsis
Nerea Pereira | | Mobiles, MWC
Golaha Moobaylka Dunida 2019 ayaa gabagabo ah. Carwadii ugu weyneyd ee taleefanka ayaa goob fiican u ahayd soosaarayaasha intiisa badan inay soo bandhigaan xalalkooda waaweyn. Daabacadan MWC-na waxaa ka buuxay taleefano isku laaban, sida kuwa nooc Alcatel ah ayaa diyaarinaya inaad si buuxda u gasho suuqa jilicsan ee casriga ah. Sidoo kale waa waqtiga ugu fiican iibso taleefannada qiimaha ugu fiican
Waana taas, in badan oo ka mid ah astaamaha soo bandhiga jiilalka cusub ee calankooda, inay ka faa'iideystaan ​​dhacdadan si ay u bixiyaan qiimo dhimis wax ku ool ah oo nagu martiqaada ku iibso taleefannada qiimo aan laga adkaan karins. Mana ka hadlayno casriga casriga ah, laakiin waxaan ka hadlaynaa dhammaan shaqooyinka sida Huawei P20 oo aad hadda ku iibsan karto qiimo aan la qiyaasi karin. In ka yar 400 euro!
Haa, shirkadda Aasiya waxay soo bandhigtay dalabyo aad u xiiso badan, laakiin tan ugu mudan waa dhimista ay sameeyeen si aan ugu iibsanno mid ka mid ah taleefannada ugu fiican suuqa qiimo aan laga adkaan karin. Kaliya fiiri dhaqso ah Tilmaamaha Huawei P20 si aan u ogaano in aan wajaheyno terminal-dhamaadka-sare: processor-ka Kirin 970, 4 GB oo RAM ah, 128 GB oo keyd gudaha ah, laba kamaradood oo leh Leica optics oo bixisa qabashada heer sare iyo batari aan la koobi karin qiime fadeexad: 399 euro . Dabcan, dalabku waa kumeel gaar ee ha moogaanin fursadda haddii aadan rabin inaad seegto gorgortan layaabka leh. Halkaasna waxaad ka heli doontaa dabool hadiyad ah!
Wax alaab ah lama helin.»/]
Dalabyo badan oo lagu iibsado telefoonno heer sare ah oo qiimo aad u hooseeya ah
Gorgortanka kale ee aadan seegi karin ayaa ah dalabyada Amazon ee kuu oggolaanaya iibso Maamuuska 10 oo leh qiimo dhimis ah 25 boqolkiiba. Waxaan ka hadlaynaa terminaal leh shaashad 5.84-inji ah iyo xallinta Full HD +, isla processor-kii Kirin 970, 4 GB oo RAM ah, 64 GB oo keyd ah, nidaam laba kamarad ah oo leh 16 iyo 24 megapixels siday u kala horreeyaan, marka lagu daro 24 kamaradda hore ee megapixel taas oo ka farxin doonta dadka is jecel.
Oo waxaa jira xitaa intaa ka sii badan: batari aan la koobi karayn 3.400 mAh, nidaam furfuran weji awood leh iyo midab gradient ah oo kaa dhigi doona jacayl isla markaana noqon doona diiradda indhaha oo dhan markasta oo aad soo saarto casrigaaga cusub. Oo hadda waxaad ku iibsan kartaa taleefankan kaliya 299 euro. Waa hagaagsan tahay haddii ay tahay inaad cusbooneysiiso boosteejadaada oo aadan rabin inaad ka tagto lacag aad u badan.
Soo saaraha Kuuriya ayaa sidoo kale ku biiraya xafladda isagoo siinaya calankii hore ee qoyska Galaxy S qiimo dhimis aan laga adkaan karin. Haa, hadda waxaad ku iibsan kartaa Samsung Galaxy S9 wax ka yar 500 euro. Ka taxaddar, weli waxay leedahay astaamo runtii awood badan leh oo awood u leh inay u dhaqaaqdo ciyaar kasta ama codsi kasta oo aan qasanayn.
Si aad u bilawdid, waxay iskuxireysaa processor 8-core Exynos ah, marka lagu daro 6 GB RAM xasuusta, 64 GB oo keyd ah, kaamiro awood leh oo leh furfurnaan ujeedadeedu si dhab ah u qaadato qabasho cajiib ah oo aan waxba ka hinaasin tartamayaasha liiskan ku jira, shaashad weyn oo 6.2-inji ah oo leh QHD + qaraar, waa nooca kaliya ee leh tiknoolajiyada noocan oo kale ah horumarsan oo aan ku tusnay.
Haa, bandhigyada 2K aad ayey faa'iido ugu leeyihiin taleefanka. Gaar ahaan haddii aan tixgelinno nidaamka deegaanka ee dhabta ah ee muuqaalka ah ee Samsung ay sameysay dhowr sano ka hor taasna waxay noo oggolaanaysaa inaan ku raaxeysanno Waxyaabaha VR ee ku jira Samsung Galaxy S9 oo leh tayo runtii layaab leh. Markaad tixgeliso inaad hadda ku heli kartid moodalkan qiimaha soo jiidashada leh, waa ikhtiyaar aad u fiican inaad tixgeliso haddii aad raadineyso inaad iibsato taleefanno heer sare ah oo leh qiimo jaban.
Waxaad arki doontaa in qaabkani yahay nooca Talyaani ee Samsung Galaxy s9, laakiin waad ku kalsoonaan kartaa inaadan wax dhibaato ah la kulmi doonin markaad ka isticmaaleyso Spain. Haa, waxay leedahay astaamo la mid ah nooca dalkeenna.
Dabcan, waa inaad maanka ku heysaa in dhammaan dalabyadan ay yihiin waqti xaddidan, markaa haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato mid ka mid ah gorgortanka laga heli karo liiskan, ha seegin fursadda ka hor intaysan dhammaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MWC » Ka faa'iideyso MWC 2019 si aad ugu iibsato telefoonno heer sare ah oo qiimo dhimis weyn leh